ဘ၀ကို အရှုံးမပေးဘူးနော် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » ဘ၀ကို အရှုံးမပေးဘူးနော်
Posted by panpan on Aug 5, 2011 in Other - Non Channelized, Society & Lifestyle | 11 comments
မဖြစ်နိုင်တာ မရှိ အရှုံးမပေးသူ
စိတ်အားငယ်နေသူများ မိမိဘ၀က ထိုလူ့လောက် ဆိုးနေပြီလား
မိမိမှာ ကိုယ်လက်အင်္ဂါအပြည့်အစုံရှိနေရင် လဲကျနေလား ပြန်ထလိုက်ပါ
အပျင်းကြီးနေသူများ မိမိလို ထိုလူအပျင်းကြီးရဲ့လား
မိမိမှာ ကိုယ်လက်အင်္ဂါအပြည့်အစုံရှိရက်နဲ့ အလုပ်လုပ်ဖို့ ပျင်းမနေပါနဲ့တော့
သန်သန်စွမ်းစွမ်းနဲ့ ရေသာခိုချင်သူများ အတုယူပါ
ဆုံးရှုံးမှုတွေကြောင့် စိတ်ဓါတ်ကျနေသူများ အားတင်းပါ
မတ်တပ်မရပ်နိုင်သူတောင်မှ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်နိုင်တာကို အားကျလိုက်ပါ
ထိုထိုသောအကြောင်းများအတွက် ပုံတွေကို ကူးယူတင်လိုက်ပါကြောင်း…ရွာသူရွာသားအပေါင်းတို့ရှင့်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အနိုင်မခံ အရှူံးမပေးတဲ့ သူ့ စိတ်ဓာတ်ကို ချီးကျူးပါတယ်။တင်ပေးတဲ့ ပန်ပန်ကိုလည်း ကျေးဇူးပါ
အဲဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို အရမ်းလေးစားတယ်။
ခြေလက်အင်္ဂါပြည့်စုံတဲ့လူတွေတောင် အလုပ်လုပ်ဖို့ကို ဆင်ခြေပေးပြီး ချိန်ခါရွေးနေကြပေမဲ့ သူတို့တွေက လောကဓံ ကို ကြံ့ကြံ့ခံ နိုင်ကြတယ်။ ဖြစ်နေရတဲ့ဘ၀ကို အားငယ်မနေပဲ စိတ်ဓါတ်တွေခိုင်မာကြတယ်။ ဒီပုံတွေကြည့်ပီး အားအင်တခု ဖြစ်လာကြမှာပါ။
ခုလိုတင်ပေးတဲ့ pan pan ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
pan pan ရေ- ဘ၀နဲ့အားမာန် လို့ တောင် ပြောချင်တယ်။ လွယ်လွယ်ကူကူ တောင်းစားနေတဲ့လူတွေကို ပြချင်တယ်။ ပါရမီလမ်းမှာရထားဖြတ်လို့ ကားစောင့်ရရင် တောင်းစားနေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ရှိတယ်။ အရင်က ကလေးလေးကို လက်ဆွဲပြီး မျက်စိမမြင်သလိုနဲ့ တောင်းတယ်။ ခုရက်ကျတော့ ကလေးလေး မပါတော့ သူ့ချည်းပဲ မြင်မြင်ထင်ထင်နဲ့ ကားတွေကြားထဲ လျှောက်သွားပြီး တောင်းတယ်။ လူကြည့်တော့လည်း ကိုယ်အင်္ဂါ အပြည့်အစုံနဲ့၊ အသက်ကလည်း (၄၀-၅၀ လောက်) လုပ်ကိုင်စားနိုင်သေးတဲ့အရွယ် ပဲရှိသေးတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ တောင်းစားနေမှန်း မသိဘူး။
အိုး. အာဂဦးလေးကြီးပါလား။လုပ်နိုင်တယ်နော်။ခြေချောင်းလေးတွေ ကလက်တွေလှုပ်ရှားနေသလိုဘဲ။ဘဝကိုအနိုင်မခံအရှုံးမပေးဘဲ ကိုယ့်ချွေးနည်းစာလေးနဲ့ ရှာစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်ရှင်မို့ အားကျပါတယ်
တကယ့်ကိုချီးကျူးစရာလူပါပဲ ။။ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်နော် ။ ကိုယ်လက်အင်္ဂါမပြည့်စုံတာကိုအကြောင်းပြပြီးတောင်းစားနေတဲ့လူတွေကိုပြသင့်တယ်
အဓိက က လုပ်ချင်စိတ် ရှိဖို့ ..
ဒီလို စိတ်ဓါတ်မျိုးရှိမှ ကောင်းနေတဲ့လူဖြစ်ဖြစ် ချို့ယွင်းသူ ဖြစ်ဖြစ် အလုပ်လုပ်မယ် ကောင်းတာ လုပ်မယ်
ဒီစိတ်ဓါတ် မရှိရင် ကောင်းနေတဲ့လူလဲ တောင်းစားမယ် ခိုးစားမယ် .. ညာစားမယ် .. ချို့ယွင်းနေတဲ့လူလဲ ဒီအတိုင်းပဲ
အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်မရှိမှတော့ ဘယ်လောက်ငယ်ရွယ်သန်မာနေပါစေ အပျင်းတစ်နေမှာပါ
မသန်စွမ်းဘူးဆိုပြီး လက်လျှော့တဲ့လူတွေရှိသလို သာမန်လူတွေထက် အဆပိုပြီးကြိုးစားသူတွေလည်း ရှိပါတယ်
သူ.၇ဲ.စိတ်ဓါတ်ကိုလေးစားမိသလို သူ.ရဲ. ဘ၀ပေး ကုသိုလ်ကံကိုလဲ သနားမိတယ်ဗျာ
ဒီလိုလူမျိုးတောင် အလုပ်လုပ်သေးတာနော်။ လမ်းဘေးမှာ အဖွဲ့အစည်းနဲ့များ လိုက်တောင်းနေတဲ့သူတွေကို ခေါ်ပြလိုက်ချင်တယ်။ တစ်ခါတလေများ မပေးရင် ကိုယ့်တောင်သတ်သွားမလားအောင်းမေ့ရတယ်။ ကလေးလည်း ကလေးမို့လို့ လူကြီးလည်းလူကြီးမို့လို့ သူတို့ကတော့ ပါးစပ်လေးနဲ့လိုက်တောင်းနေကြတယ်။ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းနဲ့ ပိုက်ဆံမရှာကြဘူး အံ့ပါရဲ့နော်…
မမနောရယ် ငွေကိုလွယ်လွယ်ရတော့ ရတဲ့နည်းနဲ့ယူတာပေ့ါ
အဲဒီလိုဝတ်စုံနဲ့ဆိုရင် အလုပ်ပင်ပင်ပန်းပန်းမလုပ်ရဘဲ ပိုက်ပိုက်ရလို့လေ